म कहिलेसम्म कर तिरिरहने अनि मन्त्री र हाकिम मेरो करबाट कहिलेसम्म मस्ती गरिरहने ? - khabarchakra.com ~ News from nepal
म कहिलेसम्म कर तिरिरहने अनि मन्त्री र हाकिम मेरो करबाट कहिलेसम्म मस्ती गरिरहने ?
११ श्रावण २०७६, शनिबार ०९:३१ 27/07/2019 Khabar Chakra
पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाले राज्यमा कर सदुपयोग नभएकोमा गम्भिर चिन्ता सहितको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । संग्रौलाको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । बर्तमान सरकारले हरेक कर्मचारी तथा श्रमिक र सम्पूर्ण व्यवसायहरुलाई करको दायरामा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेसंगै करको विषयमा चर्चा बढ्दै गर्दा संग्रौलाको यो स्टाटस अत्यधिक शेयर भएको छ ।
यस्तो छ संग्रौलाको कर सम्बन्धि दृष्टिकोण
बिहान ७:३० बजे काममा हिडछु। म घरमा सुत्छु। यो मेरो श्रमले बनाएको घर हो । मेरो पैसाले किनेको जमिन हो। म यसको कर तिर्छु । मेरो छिमेकीले कोठा भाडामा लगाएका छ्न् । उनी त्यसको पनि कर तिर्छन् ।
मैले बिहान खाएको पाउरोटीको पनि म कर तिर्छु । मैले बाँच्न पनि कर तिर्नुपर्छ । म ६ घण्टा पढाउँछु । मेरो दिमाग र श्रमबापत म तलब
पाउँछु । तर, त्यसमा पनि कर लाग्छ ।
म गाडी किन्छु । त्यसमा कर तिर्छु । प्रत्येक वर्ष कर तिर्छु । म पेट्रोल किन्छु, त्यसमा पनि कर तिर्छु । म सडकमा गाडी कुदाउँछु, त्यसको पनि कर तिर्छु ।
म यो देशको सन्तान हुँ। मेरो जिम्मेवारी छ, यो देश जोगाउने। म नागरिक हुँ यो देशको । मेरो जवाफदेहिता छ देशको संंरक्षण गर्ने। तर, मलाई शासन गर्छन् मेरा देशका नेता। मलाई शोषण गर्छन्, मेरा नेता।
के चुनाव मेरो श्रममा लगाएको करबाट बाजी खेल्ने खेल मात्र हो रु हरेक नागरिक सचेत हुन अवाश्यक छ । सोध्नुहोस् प्रश्न । लोकतन्त्रलाई आफ्नो हातमा लिने प्रयास गर्नुहोस्। निराशा होइन, चेतनाको खेती गरौं ।
(डा. युवराज संग्रौलाको फेसबुकबाट)
← म कहिलेसम्म कर तिरिरहने अनि मन्त्री र हाकिम मेरो करबाट कहिलेसम्म मस्ती गरिरहने ?
+ २ पासलाई ३ नं प्रदेशमा सरकारी जागिर →
२५ माघ २०७६, शनिबार १२:३७ Khabar Chakra 0
भारतीय सेनालाई नेपाली भूभागबाट माला लाएर विदाइ गर्न चाहन्छौंः नेकपा नेता गैरे
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार १९:३९ Khabar Chakra 0
एकता विरोधीले भ्रम फैलाए, अस्वस्थ भएकाले वैठकमा अनुपस्थित: हरिबोल गजुरेल
३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०९:५३ Khabar Chakra 0